စက်တင်ဘာလ 29, 2019
Trestolone Acetate (MENT) အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကို
1.What Trestolone Acetate (MENT) ဖြစ်သနည်း2။ Trestolone Acetate ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်သနည်း?
Trestolone Acetate (MENT) ၏ 3.Uses 4.Trestolone Acetate (MENT) သောက်သုံးသော
5.Trestolone Acetate (MENT) ဝက်ဘဝ 6.Trestolone Acetate (MENT) သံသရာ
7.Trestolone Acetate (MENT) ရလဒ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် 8.Trestolone Acetate (MENT)
9.Trestolone Acetate (MENT) bulking များအတွက် 10.Trestolone Acetate (MENT) အကျိုးခံစားခွင့်
11.Trestolone Acetate (MENT) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ရောင်းရန် 12.Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်
13.Where Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
1.What Trestolone Acetate (MENT) ဖြစ်သနည်း
Trestolone အက်စီတိတ် (MENT) ထို့အပြင် a6157 alpha-methyl-nortestosterone အဖြစ်လူသိများ CAS 87-5-7, (MENT အမှုန့်) testosterone ဟော်မုန်းထက်ပင်ပိုမိုအားကောင်းကြောင်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်ဒြပ် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးကာယဗလရည်ရွယ်ချက်များအဖြစ်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းအသုံးပြုသည်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးအထီးတားဆေးအစီအမံများအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ လုံလောက်သောပမာဏအုပ်ချုပ်လျှင် Steroid တစ်မျိုးအမျိုးသားများတွင်ယာယီမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Trestolone အက်စီတိတ် (MENT) (6157-87-5) ဆယ်ဆပိုပြီးအစွမ်းထက် testosterone ဟော်မုန်းထက်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်နှင့်ရလဒ်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းရယူလိုက်သည်။ ထိုသို့သောအမှုန့်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်အုပ်ချုပ်သည်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးကျူးလွန်အလေးချိန်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်အစားအစာကြံ့ခိုင်ရေး regimen အဖြစ်ဖြည့်စွက်အတူ Steroid တစ်မျိုးပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်အပြုသဘောရလာဒ်များရရှိရန်အယောင်ဆောင်ကာယဗလ lifters ။
2.How Trestolone Acetate အလုပ်လုပ်တယ်သနည်း
Trestolone Acetate (MENT) CAS 6157-87-5 ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအဆီလျှော့ချဖို့ကာယဗလကူညီပေးသည်။ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအောင်မြင်ရန်ရန်, Steroid တစ်မျိုးခန္ဓာကိုယ်ကောင် hardening နှင့်ဖြတ်တောက်နှင့်အတူအခြားအ Boosters နဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးကတော့ pituitary gland ကနေ gonadotropin လွှတ်ပေးရန်လွှတ်ခြင်းကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်ယာယီမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးကိုလည်း gonadotropin များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် follicles လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်းများနှင့်ပင်အနိမ့်ပမာဏသာရှိဟော်မုန်း luteinizing ။ ဟော်မုန်း (FSH) နှင့် Luteinizing ဟော်မုန်း (LH) ကိုနှိုးဆွ follicles, spermatogenesis ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဝှေးစေ့ spermatozoa ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည်။
လွတ်မြောက်ရေးအတွက် LH နဲ့ FSH inhibited သောအခါ, spermatogenesis ရာအရပျယူမထားဘူး။ ဖိနှိပ် LH နောက်ထပ်သုတ်ပိုးထုတ်လုပ်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, အရှင်, testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုကနျ့သ။ MENT အမှုန့်အန်ဒရိုဂျင်အပေါ်မူတည်ကြောင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာအများစုများအတွက်လုံလောက်သောအစားထိုးကုထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကာယဗလများအတွက် Superdrol (Methasterone) ၏တစ်ဦး In-depth ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Trestolone Acetate (MENT) ၏ 3.Uses
မှောင်ခိုဈေးကွက်ကုန်သည်တွေဖို့ဒါမှမဟုတ်တန်ပြန်ဖြည့်စွက်သည့်ကုမ္ပဏီများကျော်သူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုကြွေးသောအခြားဟို steroids မတူဘဲ, Trestolone Acetate သည့်ကာယဗလလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားအလွန်ရေပန်းစားအောင်တရားဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနရန်၎င်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုပေးဆပ်ရန်ရှိသည်။ MENT ပထမဦးဆုံး 1960s ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီက Schering တစ်သုတေသန-based ဆေးဝါးကုမ္ပဏီနှင့်ပြည်သူ့အင်အားကောင်စီအထီးကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုကုထုံးအဖြစ်ဟော်မုန်းအစားထိုး၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဤ Steroid တစ်မျိုးသို့၎င်းတို့၏သုတေသနတွင်အောက်ပါဒီ Steroid တစ်မျိုးထုတ်လုပ်အတွက်အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ဤရွေ့ကားကုမ္ပဏီများသည်ကာယဗလများအတွက်သင့်လျော်သောပု Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူကွဲပြားစရိုက်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အပြင်, ဒီ Steroid တစ်မျိုးအန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးကုထုံးအတွက်ကျယ်ပြန့်အသုံးဝင်သည်။
ဓတေားနှင့်အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးကုထုံးနှင့်ဓတေားထက်အခြား, အခြားသော Trestolone Acetate (ရှိပါတယ်အသားပြင်ဆင်မှုအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် transdermal အဖြစ်ဆရာ) မူလတန်း hypogonadism, ဆံပင်ကိုရိတ်အဖြစ်အားကစားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦဖြုန်းအရိုးထုထည်, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ, testicular ပျက်ကွက်, BHP, ASIH, sarcopenia, cachexia နှင့်ကြွက်သားများဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်အသုံးပြုသည်။
4.Trestolone Acetate (MENT) သောက်သုံးသော
MENT တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ်စီးပွားဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကတည်းကသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီမဟုတ် Trestolone Acetate (MENT) သောက်သုံးသော အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်။ အလွန်အစွမ်းထက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်း, အသေးစားဆေးညွှန်းကာယဗလများအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးတစ်ဆယ်ဆပိုမိုအစွမ်းထက် testosterone ဟော်မုန်းထက်သည်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းထက်နှစ်ဆယ်ဆပိုမိုထိရောက်သော spermatogenesis ဖိနှိပ်ဖော်ပြသည်။
ရလဒ်အနေနဲ့တစ်နေ့လျှင် 10mg (လေ့ 3-16mg) အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးညွှန်းအများဆုံးအရင်ကဆိုရင်များအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Oil-based Injection နှစ်ခုမှသုံးရက်ပေါင်း၏ကြားကာလနှင့်အတူအကြမ်းဖျင်း 10-20mg အတွက်ယူနိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထိရောက်မှုကိုလူအားလုံးတို့အတွက်တူညီသောမဟုတ်ပါဘူးကတည်းကတချို့လူတွေကအကောင်း Trestolone Acetate (MENT) ရလဒ်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်ကျော် 10mg ၏ဆေးညွှန်းကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။
ကွဲပြားခြားနားသောလူများတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ progestational နှင့်အီစထိုဂျင်ဂုဏ်သတ္တိများမှ sensitivity ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီရှိသည်။ သူတို့အလေးအနက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်မြင့်မားသောကြောင့်ဆေးညွှန်းသို့သော်အကြံပြုကြသည်မဟုတ်။
Trestlone ၏အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများကိုနေ့တိုင်း 20-50mg ၏ဆေးညွှန်းကိုသုံးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤကယူသောပုံစံပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာ, ထိုးဆေးပုံစံ transdermal နှင့်ခံတွင်းပုံစံများကိုထက်အနည်းငယ်နိမ့်နေပေမည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သို့သော်, ဒီမူးယစ်ဆေးနှုတ်အုပ်ချုပ်ခွင့်မရသဖြင့်, ဆေးထိုးခြင်းနှင့် transdermal ဖြေရှင်းချက်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေအဖြစ်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အီစရိုဂျင်နှင့် prolactin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြုခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့ Cabergoline နှင့် Arimidex ကဲ့သို့ aromatase inhibitor တူသော prolactin inhibitors အတူ Steroid တစ်မျိုးသုံးစွဲဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
တချို့ကအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများအ 50 ရက်သတ္တပတ်တစ်သံသရာများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း 75-4mg ၏ဆေးညွှန်းယူနိုငျသညျ။ ထိုအသုံးပြုသူများအကြောင်း, အိပ်ပျော်နေသောမတိုင်မီတဦးတည်းနှင့်နှိုးထပြီးနောက်အခြားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်, အပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့သောက်သုံးသောခွဲထွက်သင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူများက 75-100mg မှတက်၏ဆေးညွှန်းယူနိုငျသညျ။ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းထိုသို့သောသောက်သုံးသော, သုံးပိုင်းသို့ခွဲပေးနိုင်ပါသည်:
အိပ်ပျော်နေသောခင်မှာသို့မဟုတ် night- 25mg မှာ
လာသောအခါ Trestolone Acetate ၏သောက်သုံးသောအောက်မှာနှင့်ထိရောက်သောရလဒ်အတွက်တစ်ဦးကပြည့်စုံချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်ပါသည်။ တဦးတည်း, ဒါကြောင့်, အဆီဖျက်သိမ်းရေးနှင့်ကြွက်သားဖြည့်စွက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာထိရောက်တဲ့ရလဒ်တွေကိုစမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောရလဒ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းသည့်လေ့ကျင့်ခန်း၏ထိရောက်သောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အဖြစ်တသမတ်တည်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုလျှော့ချဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
5.Trestolone Acetate (MENT) ဝက်ဘဝ
တစ်ဦးက Steroid တစ်မျိုးဝက်ဘဝကိုမူးယစ်ဆေးကိုစုပ်ယူနဲ့ယူပမာဏ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထက်ဝက်ပပျောက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကခေါ်ဆောင်သွားအချိန်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Trestolone Acetate ရှစ်ထံမှဆယျ့နှစျနာရီ (8-12 နာရီ) အထိဝက်ဘဝ။
ရလဒ်အနေနဲ့တဦးတည်းကသွေးထဲမှာတသမတ်တည်းပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းကိုသေချာသည့်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးသေးငယ်တဲ့ပမာဏအတွက်မူးယစ်ဆေးယူနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဆေးညွှန်းနေ့ရက်ကာလ၌နှစျခုမှသုံးကြားကာလအတွက်ယူနိုင်ပါသည်။ သွေးထဲတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ပြင်းအားအမျိုးမျိုး၏ရလဒ်အဖြစ်ကအသုံးပြုသူများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ထက်ဝက်-ဘဝတွက်ချက်နိုင်သောမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဤသည်အချိန်မီဆေးများအတွက်မူးယစ်ဆေးကိုယူပြီးအတွက်အသုံးပြုသူအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့်တဦးတည်းလေးပတ်ကတစ်သံသရာ၌၎င်း, မူးယစ်ဆေး 50hours တစ်ဝက်သည်အသက်ကိုသောယူဆချက်အောက်မှာတစ်နေ့လျှင် 8mg ယူရန်ဆုံးဖြတ်သည် အကယ်. အောက်ပါအတိုင်းသကဲ့သို့, အသွေး၌အာရုံစူးစိုက်မှုမူကွဲဖြစ်နိုင်သည်:
ဒီသောက်သုံးသောများတွင်တဦးတည်း 8mg ၏ 25 နာရီကြားကာလတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးယူနိုငျသညျ။ အဆိုပါသောက်သုံးသော6pm တွင်စတင်သည်လျှင်ဒုတိယသောက်သုံးသောယူသောအခါ, အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် 12.5 နာရီ (8 pm တွင်) အပြီး 2mg လိမ့်မည်။ ဒုတိယသောက်သုံးသော 25mg ဖို့အာရုံစူးစိုက်မှုမြှင့်လိမ့်မည်သည့် 37.5mg, ပါဝင်သည်။
ရှစ်နာရီစက္ကန့်သောက်သုံးသော (10 pm တွင်) ပြီးနောက်, အာရုံစူးစိုက်မှု 18.75mg ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရှစ်နာရီ, အကြာတွင်ကြောင့်ထိုနေ့ရက်သည်များအတွက်ပထမဦးဆုံးထိုးခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သောအခါ, လာမယ့်နေ့၏6လေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်ယခင် နေ့မှစ. အကြောင်းကို 9.4mg တစ်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီးအခါဒုတိယနေ့၏ပထမဦးဆုံးသောက်သုံးသောလုပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ထိုသို့သောပုံစံလေ့ကျင့်ခန်းမီနှင့်ပြီးနောက်အသွေး၌ Steroid တစ်မျိုးတစ်စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစူးစိုက်မှုသေချာ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Trestolone Acetate (MENT) ဝက်အသက်သည်အသုံးပြုသူများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုဎစဉ်အတွင်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်, ရှေ့တော်၌ထင်ရှားဖြစ်သောအရေးအကြီးဆုံးကာလ, စဉ်အတွင်းသာမြင့်သောအသေချာစေရန်ကူညီပေးသည်တွက်ချက်ဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ကြလော့။ Trestolone Acetate ၏သငျ့လျြောသောတွက်ချက်မှု (MENT) ဝက်အသက်သည်သောက်သုံးသောစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်အကျိုးရှိသောရလဒ်အောင်မြင်ရန်အသုံးပြုသူကူညီပေးသည်။
6.Trestolone Acetate (MENT) သံသရာ
က Trestolone Acetate ယူပြီးမှကြွလာသောအခါကွဲပြားခြားနားသောလူဦးကွဲပြားခြားနားသောသံသရာသုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအကြီးအကျယ်မူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတဦးတည်းရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ တဦးတည်းလည်းမဆိုသံသရာမှကျူးလွန်မတိုင်မီ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့သို့အရသံသရာ၏ရိုက်ခတ်မှုများနားလည်သင့်တယ်။
သင်တစ်ဦးသံသရာသို့အရသောအခါ, သံသရာတစ်လျှောက်လုံးသွေးထဲတွင်သံသရာ၏အရှည်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုစဉ်းစားရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ကောင်းမွန်စွာထူထောင်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူကအသင့်လျော်ဆုံးရွေးချယ်ဖို့လွယ်ကူသည် Trestolone Acetate (MENT) သံသရာ မှကျူးလွန်ဖို့။ Trestolone Acetate နှင့်အတူကြောင့်ပင်နှစ်ပတ်အတွင်းတစ်သံသရာနှင့်အတူသိသာထင်ရှားသောရလဒ်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အများဆုံးသင့်လျော်သောသံသရာလေးခြောက်လမှပတ်ပြေးသငျ့သညျ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ထိုးလုပ်မယ်လို့ကနေတဦးတည်းကိုကာကွယ်တားဆီးသောကွောငျ့ဤစံပြသံသရာဖြစ်ပါတယ်။
7.Trestolone Acetate (MENT) ရလဒ်များကို
Trestolone Acetate က၎င်း၏အစွမ်းထက်သက်ရောက်မှုများအတွက်လူကြိုက်များရရှိထားသူတစ်ဦးအလွန်အမင်းအစွမ်းထက် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောလူကဒီ Steroid တစ်မျိုးစဉ်းစားပါအဘယျကွောငျ့ features တွေ, တစ်ခုမှာကြောင့်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်အတွင်းမှာသဘောပေါက်သည်၎င်း၏ထိရောက်သောရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအစာရှောင်ခြင်းအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အောင်မြင်ရန်ရှာကြံလူများအတွက်အစွမ်းထက်ရလဒ်ရှိပါတယ်။
ဒီမူးယစ်ဆေးသုံးပြီး Beginners stacking မပါဘဲပင်နှစ်ပတ်အတွင်းအဖြစ်ရေတိုအဖြစ်သိသာရလဒ်များကိုရရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအာနိသင်အဘို့, အသုံးပြုသူများအပင် 3-6mg ၏သေးငယ်တဲ့ဆေးညွှန်းတွေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြွက်သားအမြတ်နှင့်အလေးချိန်အရှုံးရလာဒ်များရရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါကြွက်သားအမြတ်ရလဒ်များကိုအားကစားသမားများနှင့်အလေးချိန် lifters အလွန်အမင်းဒီမူးယစ်ဆေးကိုစဉ်းစားစေသည်ဖြစ်သောလည်းကြာရှည်ဖြစ်ကြသည်။
ကာယဗလထက်အခြားသာမန်ပြည်သူတွေလည်းတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုကောင်အောင်မြင်ရန်ဒီမူးယစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤရလဒ်သည်ကောင်းသောယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူတစ်ဦးမွငျ့မားသောအစာစားချင်စိတ်ကိုလိုအပ်သည်အရာလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ပိုပြီးခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။
များ၏စွမ်းရည်ကို Trestolone Acetate အမှုန့် spermatogenesis ၏ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Steroid တစ်မျိုး၏လွှတ်ပေးရန်ဖိနှိပ်ဖို့ယောက်ျားတို့အတွက်ဆေးဝါးကုသမှုမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးဝင်သောစေသည်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် 8.Trestolone Acetate (MENT)
Trestolone Acetate ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားသောလူများအတွက်အကျိုးရှိသောမူးယစ်ဆေးပေးပါသည်။ Trestolone Acetate (MENT) ဖြတ်တောက်ခြင်းသေချာပေါက်သူတို့ရဲ့ကြွက်သားအပေါ်အလွန်အကျွံ strain မလိုဘဲ၎င်းတို့၏ခန္ဒာကိုယ်ထဲတွင်အများကြီးအဆီလျှော့ချဖို့အလေးချိန် lifters နှင့်ကာယဗလနိုင်ပါတယ်။ တစ်အလွကောင်နှင့်အတူတစ်ဦးပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အောင်မြင်ရန်, Trestolone Acetate တစ် Trestolone Acetate (MENT) တွင်ရလဒ်များလိုချင်သောရလာဒ်များပေါ် မူတည်. သံသရာဖြတ်တောက်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ progestational နှင့် oestrogenic sensitivity ကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတွဲသုံးနိုင်ပါသည်။
Trestolone ၏အဆင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း, တဦးတည်း Halotestin သို့မဟုတ် trenbolone တူသော Non-မွှေးကြိုင်အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အတူ Winstrol သီးနှံများကိုပုံနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်အများဆုံးကာယဗလအောင်မြင်ရန်ငှါအလိုရှိကြောင်းတကိုယ်တည်းနဲ့ Hard ပုလ်၏အားကြီးသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော sensitivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီ Trestolone acetate stacking သည့်အခါ Deca-Durabolin, Equipoise သို့မဟုတ် primobalin ကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
9.Trestolone Acetate (MENT) bulking များအတွက်
Trestolone အဖြစ်ကောင်းစွာ bulking အခြား steroids နှင့်အတူ stacked နိုင်ပါသည်။ Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့် bulk ယေဘုယျအားဖြင့်အစဉ်အမြဲမြဲနှင့်စနစ်တကျသင်တန်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ, ကြွက်သားအကျိုးအမြတ်တိုးပွားလာကြရှာသောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရည်ရွယ်သည်။ အများအားဖြင့်, ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြွက်သားဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောပုံကြီးချဲနည်းပြအလုပ်ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်လျော်သော steroids နှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါ Trestolone, ကလွယ်ကူတဦးတည်း, ခန္ဓာကိုယ်အဆီဆုံးရှုံးထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လွယ်ကူချောမွေ့ကြွက်သားထုထည်၏ရရှိမှုနှင့်ပိုပြီးနှင့်စိတ်အားသန်သောလေ့ကျင့်ခန်းခံနိုင်ရည်ရှိဖို့စွမ်းအင်နှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုရှိသည်ဖို့ကိုယျခန်ဓာကို enable ရန်အဘို့အစေနိုင်သည်။
bulk တခါတရံအလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌မြန်ဆန်ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ရှာသောလူတို့အဘို့အလွန်ကြမ်းတမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သော bulk သံသရာအသုံးပြုသူရေ retention ကိုပါဝင်သောအများဆုံး bulk ပမာဏ, ပေးနိုငျသညျ။ ဤရလဒ်သည်, သို့သော်, အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်မည်မဟုတ်ပါ။ သံသရာ bulking များအတွက် Trestolone Acetate (MENT) နဲ့ stacked ခံရနိုငျသောစတီရွိုက်၏အချို့ Dianabol, Anadrol နှင့် Trenbolone ပါဝင်သည်။
Dianabol အလွန်အမင်းချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်နှင့်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွင်းလျင်မြန်စွာအကျိုးအမြတ်ပေးသည်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွက် bulking ဘို့စဉ်းစားသော steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ Dianabol နှင့်အတူ Trestolone Stacking 20 ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကြွက်သားထုထည်၏6ပေါင်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထိုးစရာမလိုဘဲသိပ်သည်းခြင်းနှင့်နေရတယ်လို့ထုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Dianabol လည်းအကျိုးရှိသည်။
ထို့အပြင် Nandrolone အဖြစ်လူသိများ Deca-Durabolin, အစာရှောင်ပူးတွဲအနာပျောက်စေသောအများနှင့်ကြွက်သားပြန်လည်နာလန်ထူရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့် bulking များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု shortens ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစခေတ်လွန်သံသရာကုထုံးများအတွက်အကျိုးရှိပါတယ်။ ဤသည် Steroid တစ်မျိုးနိမ့်ဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိပြီးအဖြစ်ကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သော Dianabol အဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်နဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါသည်။
Trenbolone အလယ်အလတ်အာဏာနှင့်အာနိသင်ရှိပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပိန်ကြုံသောခန္ဓာကိုယ်ကောင်များအတွက်သံသရာ bulking များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်သော်လည်း, တကယှဉ်ပြိုင်ဘို့ပြင်ဆင်နေဟဲဗီးဝိတ်ကာယဗလများအတွက်အကျိုးရှိသောမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာသို့သော်မည်သည့် bulk သံသရာအတွက် stacked နိုင်ပါသည်။
10.Trestolone Acetate (MENT) အကျိုးခံစားခွင့်
Trestolone acetate ကြောင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးသပ်သူများကအတည်ပြုခဲ့ပြီးကိုလည်းအရည်အသွေးပေါ်သည်၎င်း၏တင်းကျပ်သောကြောင့်လူသိများခဲ့ပြီးဖြစ်သော၎င်း၏အာနိသင်မှဈေးကွက်ထဲမှာထွက်ရပ်။ Trestolone acetate အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ကောင်စုံလင်အဖြစ်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ရှာကြံကြသူလူ, အကြိုးကြေးဇူးမြား၏ကျယ်ပြန့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါဟာကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကူညီမှုအတွက်အဖြစ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အကြံပြုအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုအများဆုံးကြွက်သားအမြတ်နှင့်အတူတစ်ဦးပိန်, ရယူနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆည်းပူးခွင့်ပြုပါတယ်။ ထိပ်၏အချို့ Trestolone Acetate (MENT) အကျိုးခံစားခွင့် Trestolone acetate နှင့်ဆက်စပ်ပါဝင်သည်:
· Trestolone acetate ပိုမြန်သည်အခြား steroids ထက်အလုပ်လုပ်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Trestolone acetate ဆေးထိုးပြီးနောက်ချက်ချင်းရလဒ်တွေကိုကယ်တင်တတ်၏။ သူတို့ဆေးထိုးယူကြပြီပြီးနောက်သုံးစွဲသူများကခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများအတွက်ထူးဆန်းသောပြောင်းလဲမှုအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ ထူးခြား၎င်း၏ရလာဒ်များရေရှည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အသုံးပြုသူများကသူတို့ကြွက်သားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်လည်ထိုးသွင်းစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာမဆိုအခြား Steroid တစ်မျိုးထက်ပိုမိုမြင့်မားကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်း၎င်း၏နှုန်းကိုတိုးမြှင့်စေသည်ရာ testosterone ဟော်မုန်း၏ဆယ်ဆပိုပြီး myotopic အကျိုးသက်ရောက်မှုကယ်တင်တတ်၏။
· Trestolone acetate ဖြတ်တောက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာမူးယစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ဖို့က၎င်း၏စွမ်းရည်မြင့်မားတိုးမြှင့်နေကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးထိုကဲ့သို့သောအရှင်ပိန်တစ်ရှူးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လည်းအဆီကိုမီးမရှို့ရရှာသောသူတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကိုင်, ဖြတ်တောက်ခြင်း၏သံသရာတိုးတက်အောင်အတွက်ကူညီပေးသည်သောအခြား prohormones နှင့်အတူ stacking အဖြစ်ထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။
· Trestolone acetate သံသရာ bulking အတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများက၎င်း၏အသုံးပြုသူသူတို့ကိုကြွက်သားဖွဲ့စည်းရေးမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်ရာမြင့်သောနိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုနှုန်းထားများရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းကာယဗလအလောင်းတွေ၏ဟိုပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ရင်သားကင်ဆာကုသရန် Nolvadex ဖို့ Ultimate လမ်းညွှန်
· Trestolone acetate များအသုံးပြုမှုပရိုတိန်း synthesis မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ပရိုတိန်းကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆောက်အဦးလုပ်ကွက်အဖြစ်ပြုမူကတည်းကရလဒ်အဖြစ်မူးယစ်ဆေးကြွက်သားတစ်ရှူးများ၏အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်မှုနှုန်းကယ်တင်တတ်၏။
·အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းခွန်အားအဆင့်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ အစွမ်းသတ္တိအားအဆင့်တိုးမြှင့်သုံးစွဲခက်ခဲများနှင့်ကြာကြာလေ့ကျင့်ရေး၏စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ထိုမှတပါး, အစွမ်းသတ္တိကိုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင်အရှင်မကြာခဏယလေ့ကျင့်ခန်းမှသူတို့ကိုကူညီပေးနေ, ကာယဗလသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်ကိုအတိုကောက်ကူညီပေးသည်။
·အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမတူဘဲ, trestolone Acetate အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းမထားဘူး။ အီစထိုဂျင်ထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း, ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့လူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သို့သော်တစ်ကြိမ်တည်းယူ MENT အသုံးပြုသူများ '' ခန္ဓာကိုယ်၌အ testosterone အခန်းကဏ္ဍနှင့်အရှင်အီစရိုဂျင်၏ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးချွေတာ။
·ဒါ့အပြင်များစွာသော steroids မတူဘဲမူးယစ်ဆေး DHT မှပြောင်းမထားဘူး။ ဖြစ်သကဲ့သို့ထို့အတူအဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးလိင်ဟော်မုန်း-binding globulin (SHBG) အားအတူခညျြနှောငျပါဘူးအာနိသင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
11 ။ Trestolone Acetate (MENT) ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Trestolone Acetate အမြဲတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ထိရောက်သောဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာကြွက်သားအဆောက်အဦများအတွက်အဖြစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Trestolone Acetate ခန္ဓာကိုယ်အဆောက်အဦကာယဗလမူးယစ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောလူမျိုးသည်အပြုသဘောဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အောက်ပါထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားအသုံးပြုသူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
နစ်ခ်ဟာ 27 နှစ်အရွယ်ကာယဗလမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကာယဗလများအတွက် Trestolone အမှုန့်တစ်ဝါရင့်အသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ခ်ရှစ်လကြာဒီထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်, သူရလဒ်များကိုကျေနပ်သည်။ သူဟာအလိုရှိသောအဖြစ်မူးယစ်ဆေးသူ့ကိုအတိအကျရလဒ်များကိုအားပေးတော်မူပြီကပြောပါတယ်။ နစ်ခ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြွက်သားထုထည်ရဖို့ဆက်လက်။ သူဟာမူးယစ်ဆေးသူ့ကိုအစာစားချင်စိတ်, စိတျအပွောငျးအလဲမဆိုအရှုံးပေးမပျော်ရွှင်ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ခ်ကဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူကြုံတွေ့တစ်ခုတည်းသောပြဿနာညဘက်ချွေးနှင့်အချို့သောအိပ်မပျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါရင့်ကာယဗလမယ်ဖြစ်တော်မူပြီးမှ, Nick ထိုကဲ့သို့သောနှစ်ဖက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်တို့ကိုအလေးပေးမတှေ့နိုငျတယျ။
Greg ကာယဗလများအတွက် Trestolone နောက်ထပ်ပျော်ရွှင်အသုံးပြုသူဖြစ်ပါတယ်။ Greg ဒီမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးနှင့် post ကိုသံသရာကုထုံးပြီးနောက်တစ်ဝက်သူ၏ဒုတိယသံသရာမှတဆင့်လက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ဒုတိယသံသရာမှာသူ bulking လျက်ရှိသည်နှင့်ရလဒ်များအလွန်ကောင်းနေတယ်။ Greg အဖြစ်မကြာမီသူသည်ဤသံသရာဖြင့်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ဖြတ်တောက်စတင်ရန်စီစဉ်နေပါတယ်။ Greg သူသည်အစအဦးမှာအဆိုးမြင်ကြီးသူသည်မူးယစ်ဆေးသူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အန္တရာယ်ရှိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကိုကွောကျရှံ့ကပြောပါတယ်။ မိမိအအံ့အားသင့်ဖို့, မူးယစ်ဆေးသူအစဉ်အဆက်အသုံးပြုခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး steroids တဦးဖြစ်ထွက်လှည့်လိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးသူ့ကိုမြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကောင်အားပေးတော်မူပြီ, နှင့်ကြီးမားသောကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့သူ့ကို enabled သိရသည်။ Greg မူးယစ်ဆေးအလွန်မာနထောင်လွှားသည်နှင့်သူမည်သူမဆိုထိုသို့အကြံပြုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကလင်တန်သူတစ်ဦးတိုတောင်းသောကာလအတွင်း၌ရရှိထားသူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကိုနှင့်ဤမူးယစ်ဆေးဝါး၏သေးငယ်တဲ့ဆေးညွှန်းများအတွက် Trestolone Acetate နဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှဖို့သဘောကျခံစားရပါတယ်။ ကလင်တန်ဟာအလေးချိန် lifter မကာယဗလမယ်မဟုတ်ဘဲတစ်အလွကောင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာမဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာနီးပါးတစ်နှစ်အဘို့ဤမူးယစ်ဆေးကိုသုံးထားပါတယ်, သူသည်ပိန်ကြုံသောကြွက်သားနှင့်မထိုက်မတန်-ရှာဖွေနေခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့ထက်အခြား, ဆေးလည်းလိင်စိတ်, သာယာဝပြောရေးနှင့်ချောမွေ့သောအသားအရေတိုးတက်လာဖို့သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလည်းသူ့ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်စေသည်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆီ, ကိုလျှော့ချဖို့သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ ကလင်တန်သူကမည်သည့်ပြဿနာမျှမပေးရှိပြီးအဘို့ဤမူးယစ်ဆေးသုံးပြီးဆက်လက်ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရောင်းရန် 12.Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်
Trestolone Acetate ၏ထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးမြင့်မားသောရဖို့သေချာပါပြီ။ သို့သော်တစ်ဦးအရည်အသွေးနိမ့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အနိမ့်စျေးနှုန်းများရောင်းနေသောမှောင်ခိုစျေးကွက်နှင့်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်လူများစွာရှိပါသည်။ အရည်အသွေးနိမ့် Trestolone Acetate ၏စားသုံးမှုထိုကဲ့သို့သောဆီးကျိတ်ကင်ဆာအဖြစ်ဆိုးရွားသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ purchasing စဉ်ထို့ကြောင့်, ဒီထုတ်ကုန်၏ဝယ်လက်နှင့်သုံးစွဲသူများသတိထားရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန် Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်.
၎င်း၏လူကြိုက်များနှင့်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုအောင်မြင်ရန်လိုသူလူများ၏လူဦးရေအတွက်တိုးရန်, မူးယစ်ဆေးသောအရပ်တို့ကိုမယ့်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အားသာချက်ကအခြား steroids ထက်မျှတတဲ့စျေးနှုန်းမှာအဖြစ်ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာအမြောက်အများသုံးစွဲနိုင်အတွက်ထုတ်ကုန်အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေဝယ်လက်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်နှစ်ခုဗားရှင်း, အမည်ရ 100mg / ml အတွက် Pre-ရောထွေးစင်ကြယ်သောအဆီများနှင့် 99% သန့်စင်သော Trestolone Acetate အမှုန့်၌ရောင်း။
13 ။ အဘယ်မှာရှိ Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
Trestolone Acetate ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်, အမေရိကန်, ကနေဒါ, ဘရာဇီးနှင့်မက္ကဆီကိုအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးအမျိုးမျိုးသောနေရာများအတွက်လက်လှမ်းနေသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်တွေအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဝယ်လက်သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ဝယ်နိုင်အောင်ဒါတွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဒီမူးယစ်ဆေးမရရှိနိုင်ကြပြီ။
ဒါ့အပြင်သင်သည်လည်းလုပ်နိုင် Trestolone Acetate (MENT) အမှုန့်ကိုဝယ် မျှတတဲ့စျေးနှုန်းများမှာအခြားအွန်လိုင်းဆိုဒ်များကနေတစျခုမှာလည်းဒေသခံကုန်သည်တွေကနေအမြောက်အများအတွက် Trestolone Acetate (MENT) ဝယ်နိုင်ပေမယ့်သင်ကအတုစျေးကွက်စည်ကားသကဲ့သို့ဒေသအလိုက်ထုတ်ကုန် purchasing စဉ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးနေအပေါ်သတိပေးခဲ့သည်နေကြသည်။ ဝယ်လက်မကြာခဏထူထောင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထက်အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအပေါ်ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်နှင့် Trestolone Acetate (MENT) ပေးသွင်း သူတို့တစ်တွေအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ရကြောင်းသေချာစေရန်။
Trestolone ထိုကဲ့သို့သောအထီးတားဆေးအဖြစ်, ကာယဗလနှင့်အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်ယုံကြည်လောက်ဂုဏ်သတင်းရယူလိုက်သည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးက၎င်း၏အဆင့်မြင့်အာနိသင်မှစွပ်စွဲသည်၎င်း၏လူကြိုက်များနှင့်အတူစျေးကွက်အတွက်အများဆုံးဖြစ်ပွား Steroid တစ်မျိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့အများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏အသုံးပြုသူများကသူတို့သောက်သုံးသောအချိန်ဇယား, ဝက်ဘဝတွက်ချက်မှုအဖြစ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်သင့်လျော်သောအစားအစာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာသင့်ပါတယ်။ သငျသညျကာယဗလများအတွက် Trestolone ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြံနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏အမိန့်ကိုနေရာချခြင်းနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အမေးလြှောကျက်ဘ်ဆိုက် buyaas.com သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
1 ။ Drake Ellen, Drake Randy; Saunders ဆေးဝါးသမ်မာကမျြး, (2006) p.682
2 ။ Elks; မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဘိ; ဓာတုမှာ Data: ဓာတုဒေတာများ, structures များနှင့်ကျမ်းကိုးစာရင်း။ (2014) p.538, 588
3 ။ Legato Marianne; ကျား-Specific ဆေးပညာ၏အခြေခံမူများ, (2009) p.363
4 ။ Yalkowsky ရှမွေလသည်, သူယန်, ဂျိန်း Parijat; aqueous တွင်ပျော်ဝင်နေသောဒေတာများ, (2016) P. 1567 ၏လက်စွဲစာအုပ်
5 ။ Zayas Hilda; စပိန်ဓာတု & ဆေးဝါးဝေါဟာရ, (2005) ။ P. 268